Mariana ချိုင့်ဝှမ်းးအကြောင်း – Shwe Myanmar Knowledge
Shwe Myanmar Knowledge
May 8, 2020 May 9, 2020 - by Admin - LeaveaComment
Mariana ချိုင့်ဝှမ်းသို့မဟုတ် Marianas တုတ်ကျင်းများသည်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအနောက်ဘက်တွင် Mariana ကျွန်းအရှေ့ဘက်ကီလိုမီတာ ၂၀၀ (၁၂၄ မိုင်) တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အနက်ရှိုင်းဆုံးသမုဒ္ဒရာလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လခြမ်းပုံစံဖြစ်ပြီး ၂၅၅၀ ကီလိုမီတာ (၁၅၀ မိုင်) အရှည်ရှိပြီး ၆၉ ကီလိုမီတာ (၄၃ မိုင်) အကျယ်ရှိသည်။ အမြင့်ဆုံးလူသိများသောအတိမ်အနက်သည် Challenger Deep ဟုလူသိများသည့်၎င်း၏ကြမ်းပြင်ရှိ slot-forma ချိုင့်ဝှမ်း၏တောင်ဘက်အဆုံးတွင် ၁၀,၉၈၄ မီတာ (၃၆,၀၃၇ ပေ) (± ၂၅ မီတာ [၈၂ ပေ)) ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထပ်မံ၍ မပြုလုပ်သောတိုင်းတာမှုများကအနက်ရှိုင်းဆုံးအပိုင်းကို ၁၁,၀၃၄ မီတာ (၃၆,၂၀၁ ပေ) တွင်နေရာချသည်။ နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ အကယ်၍ point ၀ ရတ်တောင်ကိုဤအချိန်၌တုတ်ကျင်းထဲထည့်ထားပါက၎င်း၏အထွတ်အထိပ်သည်ရေအောက်တွင် ၂ ကီလိုမီတာ (၁.၂ မိုင်) ကျော်နေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။
တုတ်ကျင်း၏အောက်ခြေတွင်အထက်ပါရေကော်လံသည်ဖိအား ၁,၀၈၆ ဘား (၁၅၇၅၀ psi) ရှိရာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ရှိလေထုဖိအားအဆ ၁,၀၇၁ ထက်ပိုသည်။ ဒီဖိအားမှာရေသိပ်သည်းဆ 4.96% တိုးပွားလာသည်။ အောက်ခြေရှိအပူချိန်မှာ ၁ မှ ၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (၃၄ မှ ၃၉ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်) ဖြစ်သည်။
တုတ်ကျင်းသည်ကမ္ဘာ့အလယ်ဗဟိုနှင့်အနီးဆုံးပင်လယ်ကြမ်းပြင်၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပါ။ အကြောင်းမှာကမ္ဘာသည်စုံလင်သောနယ်ပယ်တစ်ခုမဟုတ်၊ ၎င်း၏အချင်းဝက်သည်အီကွေတာထက်တိုင်များ၌ ၂၅ ကီလိုမီတာ (၁၆ မိုင်) ပိုသေးသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်အာတိတ်သမုဒ္ဒရာ၏ပင်လယ်ကြမ်းပြင်သည် Challenger Deep ပင်လယ်ကြမ်းပြင်ထက်အနည်းဆုံး ၁၃ ကီလိုမီတာ (၈.၁ မိုင်) အကွာအဝေးတွင်ရှိသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Marianas တုတ်ကျင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အမျိုးသားအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Monothalamea ကိုပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက် ၁၀.၆ ကီလိုမီတာ (၆.၆ မိုင်) တွင်စံချိန်တင်အနက်မှ Scripps Institution of Oceanography သုတေသီများကတုတ်ကျင်းထဲတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒေတာများကအဏုဇီဝဗေဒသက်ရှိများသည်တုတ်ကျင်းအတွင်းရှင်သန်ကြီးထွားကြောင်းကိုလည်းအကြံပြုထားသည်။
Mariana ခြိုငျ့ဝှမျးသို့မဟုတျ Marianas တုတျကငျြးမြားသညျပစိဖိတျသမုဒ်ဒရာအနောကျဘကျတှငျ Mariana ကြှနျးအရှဘေ့ကျကီလိုမီတာ ၂၀၀ (၁၂၄ မိုငျ) တှငျတညျရှိသညျ။ ၎င်းငျးသညျကမ်ဘာပျေါတှငျအနကျရှိုငျးဆုံးသမုဒ်ဒရာလမျးကွောငျးဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးသညျလခွမျးပုံစံဖွဈပွီး ၂၅၅၀ ကီလိုမီတာ (၁၅၀ မိုငျ) အရှညျရှိပွီး ၆၉ ကီလိုမီတာ (၄၃ မိုငျ) အကယျြရှိသညျ။ အမွငျ့ဆုံးလူသိမြားသောအတိမျအနကျသညျ Challenger Deep ဟုလူသိမြားသညျ့၎င်းငျး၏ကွမျးပွငျရှိ slot-forma ခြိုငျ့ဝှမျး၏တောငျဘကျအဆုံးတှငျ ၁၀,၉၈၄ မီတာ (၃၆,၀၃၇ ပေ) (± ၂၅ မီတာ [၈၂ ပေ)) ဖွဈသညျ။ သို့သျော ထပျမံ၍ မပွုလုပျသောတိုငျးတာမှုမြားကအနကျရှိုငျးဆုံးအပိုငျးကို ၁၁,၀၃၄ မီတာ (၃၆,၂၀၁ ပေ) တှငျနရောခသြညျ။ နှိုငျးယှဉျခကျြအရ အကယျ၍ point ၀ ရတျတောငျကိုဤအခြိနျ၌တုတျကငျြးထဲထညျ့ထားပါက၎င်းငျး၏အထှတျအထိပျသညျရအေောကျတှငျ ၂ ကီလိုမီတာ (၁.၂ မိုငျ) ကြျောနေ ဦး မညျဖွဈသညျ။
တုတျကငျြး၏အောကျခွတှေငျအထကျပါရကေျောလံသညျဖိအား ၁,၀၈၆ ဘား (၁၅၇၅၀ psi) ရှိရာပငျလယျရမေကျြနှာပွငျရှိလထေုဖိအားအဆ ၁,၀၇၁ ထကျပိုသညျ။ ဒီဖိအားမှာရသေိပျသညျးဆ 4.96% တိုးပှားလာသညျ။ အောကျခွရှေိအပူခြိနျမှာ ၁ မှ ၄ ဒီဂရီစငျတီဂရိတျ (၃၄ မှ ၃၉ ဒီဂရီဖာရငျဟိုကျ) ဖွဈသညျ။
တုတျကငျြးသညျကမ်ဘာ့အလယျဗဟိုနှငျ့အနီးဆုံးပငျလယျကွမျးပွငျ၏အစိတျအပိုငျးမဟုတျပါ။ အကွောငျးမှာကမ်ဘာသညျစုံလငျသောနယျပယျတဈခုမဟုတျ၊ ၎င်းငျး၏အခငျြးဝကျသညျအီကှတောထကျတိုငျမြား၌ ၂၅ ကီလိုမီတာ (၁၆ မိုငျ) ပိုသေးသညျ။ ရလဒျအနဖွေငျ့အာတိတျသမုဒ်ဒရာ၏ပငျလယျကွမျးပွငျသညျ Challenger Deep ပငျလယျကွမျးပွငျထကျအနညျးဆုံး ၁၃ ကီလိုမီတာ (၈.၁ မိုငျ) အကှာအဝေးတှငျရှိသညျ။
၂၀၀၉ ခုနှဈတှငျ Marianas တုတျကငျြးကိုအမရေိကနျပွညျထောငျစု၏အမြိုးသားအထိမျးအမှတျအဆောကျအ ဦး အဖွဈတညျထောငျခဲ့သညျ။ Monothalamea ကိုပငျလယျရမေကျြနှာပွငျအောကျ ၁၀.၆ ကီလိုမီတာ (၆.၆ မိုငျ) တှငျစံခြိနျတငျအနကျမှ Scripps Institution of Oceanography သုတသေီမြားကတုတျကငျြးထဲတှငျတှရှေိ့ခဲ့သညျ။ ဒတောမြားကအဏုဇီဝဗဒေသကျရှိမြားသညျတုတျကငျြးအတှငျးရှငျသနျကွီးထှားကွောငျးကိုလညျးအကွံပွုထားသညျ။
Previous Article ခရိုအေးရှားနိုင်ငံအကြောင်း(Croatia)
Next Article ပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနဆော့ဝဲလ်း ATLAS.ti software အကြောင်း
Shwe Myanmar Knowledge is your Knowledge, Health, Travel and Entertainment website. We provide you with the latest news and knowledge from the entertainment industry
ပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနဆော့ဝဲလ်း ATLAS.ti software အကြောင်း
Education Entertaiment News technology
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးသည် ၂၀၂၀ တွင် ၃.၂ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းမည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်
တရုတ်သည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတိုက်ဖျက်ရေးတွင်မီတာ ၈၀၀ မြင့်သောချောက်ကမ်းပါးများတွင်နေထိုင်သောရွာသားများကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်
အက်စတိုးနီးယားရဲတပ်ဖွဲ့ – Tallinn တွင်ဝက်ဝံများလှည့်လည်နေသည်
Shwe Myanmar Knowledge is your Knowledge, Health, Travel and Entertainment website. We provide you with the latest news and knowledge from the entertainment industry.
All Select Month May 2020 (17)
CopyRight © Shwe Myanmar Knowledge